အသင်းကြီးကိုရွေးမယ်ဆိုရင် စိတ်ချလက်ချကြည့်ရမယ့် ငါးပွဲ ခန့်မှန်းချက် - SANTHITSA
အသင်းကြီးကိုရွေးမယ်ဆိုရင် စိတ်ချလက်ချကြည့်ရမယ့် ငါးပွဲ ခန့်မှန်းချက်
ဒီတစ်ပတ် စနေ တနင်္ဂနွေရဲ့ ပရီမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲ ပွဲစဉ် (၂၈) မှာ ၂ပွဲက ရက်ရွေ့ သွားလို့ အားလုံး ၈ပွဲပဲကြည့်ရမှာပါ။ အက်စတန် ဗီလာနဲ့ရှက်ဖီး ၊ မန်စီတီးနဲ့ အာဆင်နယ်ပွဲတွေ ကိုရက်ရွေ့ ထားပါတယ်။ လက်ကျန်၈ပွဲမှာ ကိုယ်က အပေါ်စီးကပဲ ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ခန့်မှန်းထားတဲ့ငါးပွဲကိုပဲ အားပေးလိုက်ပေါ့။
နော့ဝခ်ျနဲ့ လက်စတာ (ဝ-၂)။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က မန်စီတီးကို ၁-၀ နဲ့ ရှုံးခဲ့တဲ့ လက်စတာက အပေါ်၎သင်းနေရာကနေ မဆင်းရအောင် ထိန်းရတော့မှာပါ။ နော့ဝခ်ျကတော့ ဒီနှစ်မှာ အောက်တန်းကို ပြန်ဆင်းရဖို့အတွက် သေချာသလောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။ လက်စတာရဲ့ ဂိုးပေါက်ပျောက်နေတဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဘာဒီရဲ့သွင်းဂိုတွေကို ပြန်တွေ့ ရဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ အိမ်ကွင်းအားသာချက်ကို နော့ဝခ်ျ အသုံးချနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်စတာအနိုင်ပါ။ ဂိုးများနိုင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ပွဲကို ပြောပါဆိုရင် ဒီအတွဲပါပဲ။ တိုက်စစ်မှူး မရှိတဲ့ စပါးအသင်းကို ၁-၀ နဲ့ အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ချယ်လ်ဆီးအသင်းက ဘန်းလေကွင်းမှာ ၃-ဝဂိုးနဲ့ ရှုံးခဲ့တဲ့ ဘုန်မောက်တို့ တွေ့ဆုံတာက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ လောက်လောက် လားလား တိုက်စစ်အား မထုတ်နိုင်တဲ့ ချယ်လ်ဆီးက ကစားကွက်တူတဲ့ ဘုန်းမောက်ကို ဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း အားနည်းပါတယ်။ နောက်ပြန်ပေးတဲ့ ကစားကွက်ကို ကြိုက်ကြတဲ့ အသင်း၂သင်းတွေ့ လို့ သရေလို့ပဲ ခန့်မှန်းရမှာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့လီဗာပူးနဲ့ပွဲတုန်းက ခြေမျိုးသာ ပြန်တွေ့ရင် ဆောက်သမ်တန် ဝက်စ်ဟမ်းအိမ်ကွင်းမှာ အနိုင် ၃ မှတ်ရှာလို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဝက်စ်ဟမ်းက တန်းဆင်းဇုံကနေ ရုန်းနေပါပြီ။ တိုက်စစ်တွဲလုံးတွေကို အိမ်ကွင်းမှာ ဧည့်ခံ တော့မှာပါ။ ဆောက်သမ်းတန်က ဗီလာကို ၂-၀ နဲ့ နိုင်ခဲ့တာက သိပ်ကောင်းခဲ့လိုပမဟုတ်တ်ပါဘူး။ အိမ်ရှင်ကိုပဲ အားပေး လိုက်ကြရ အောင်။
ဝက်ဖို့ဒ် နဲ့ လီဗာပူး (ဝ-၂)
တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကစားမယ့်ပွဲပါ။ တန်းဆင်းဇုံကနေ ရုန်းကန်ဖို့အားထည့် ကစားမယ့် ဝက်ဖို့ဒ်နဲ့ ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်မယ့် လီဗာပူးတို့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါ အိမ်ရှင်အသင်း အနေနဲ့ ကံကောင်းနိုင်စရာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ လီဗာပူးက အနိုင်ကစားပြီး သူ့နေရာကို သူထိန်းထားမှာပါ။ ဂိုးမများလောက်ပါဘူး။
အဲဗာတန် နဲ့မန်ယူ (၂-၂)
ဒီအပတ်အတွက် ပွဲကြီး ပွဲကောင်းလို့ ပြောရမယ့်အတွဲပါ။ အာကြီးအိမ်ကွင်းမှာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ၃-၂ နဲ့ ရှုံးခဲ့တဲ့ အဲဗာတန်က ခြေစွမ်း မညံ့ပါဘူး။ သူတို့က ပုံမှန်ခြေစွမ်း အတိုင်း ပဲကစားနေတာပါ။ မန်ယူကတော့ အတက်အကျ မငြိမ်ပေမဲ့ ဒီနှစ်ထဲမှာ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာပြီလို့ ပြောရမှာပါ။ အနိုင်ပွဲတွေပြန်ရှာတွေ့ လာတဲ့မန်ယူနဲ့ အိမ်ကွင်းကစားပုံမာတဲ့ အဲဗာတန်တို့တွေ့ဆုံမှုမှာ သရေရလဒ်ကို မှန်းရမှာပါ။ ဂိုးများဖို့ရာရှိပါတယ်။
မောင်ယဿ REF: football predition . com
အသငျးကွီးကိုရှေးမယျဆိုရငျ စိတျခလြကျခကြွညျ့ရမယျ့ ငါးပှဲ ခနျ့မှနျးခကျြ
ဒီတဈပတျ စနေ တနင်ျဂနှရေဲ့ ပရီမီးယားလိဂျ ပွိုငျပှဲ ပှဲစဉျ (၂၈) မှာ ၂ပှဲက ရကျရှေ့ သှားလို့ အားလုံး ၈ပှဲပဲကွညျ့ရမှာပါ။ အကျစတနျ ဗီလာနဲ့ရှကျဖီး ၊ မနျစီတီးနဲ့ အာဆငျနယျပှဲတှေ ကိုရကျရှေ့ ထားပါတယျ။ လကျကနျြ၈ပှဲမှာ ကိုယျက အပျေါစီးကပဲ ကွညျ့ခငျြတယျ ဆိုရငျတော့ ခနျ့မှနျးထားတဲ့ငါးပှဲကိုပဲ အားပေးလိုကျပေါ့။
နော့ဝချြနဲ့ လကျစတာ (ဝ-၂)။
ပွီးခဲ့တဲ့အပတျက မနျစီတီးကို ၁-၀ နဲ့ ရှုံးခဲ့တဲ့ လကျစတာက အပျေါ၎သငျးနရောကနေ မဆငျးရအောငျ ထိနျးရတော့မှာပါ။ နော့ဝချြကတော့ ဒီနှဈမှာ အောကျတနျးကို ပွနျဆငျးရဖို့အတှကျ သခြောသလောကျဖွဈသှားပါပွီ။ လကျစတာရဲ့ ဂိုးပေါကျပြောကျနတေဲ့ တိုကျစဈမှူး ဘာဒီရဲ့သှငျးဂိုတှကေို ပွနျတှေ့ ရဖှယျရှိနပေါတယျ။ အိမျကှငျးအားသာခကျြကို နော့ဝချြ အသုံးခနြိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ လကျစတာအနိုငျပါ။ ဂိုးမြားနိုငျပါတယျ။
ဒီတဈပတျမှာ စိတျဝငျစားစရာ ကောငျးတဲ့ပှဲကို ပွောပါဆိုရငျ ဒီအတှဲပါပဲ။ တိုကျစဈမှူး မရှိတဲ့ စပါးအသငျးကို ၁-၀ နဲ့ အနိုငျယူခဲ့တဲ့ခယျြလျဆီးအသငျးက ဘနျးလကှေငျးမှာ ၃-ဝဂိုးနဲ့ ရှုံးခဲ့တဲ့ ဘုနျမောကျတို့ တှဆေုံ့တာက စိတျဝငျစားစရာကောငျးပါတယျ။ လောကျလောကျ လားလား တိုကျစဈအား မထုတျနိုငျတဲ့ ခယျြလျဆီးက ကစားကှကျတူတဲ့ ဘုနျးမောကျကို ဂိုးသှငျးနိုငျဖို့ အခှငျ့အလမျး အားနညျးပါတယျ။ နောကျပွနျပေးတဲ့ ကစားကှကျကို ကွိုကျကွတဲ့ အသငျး၂သငျးတှေ့ လို့ သရလေို့ပဲ ခနျ့မှနျးရမှာပါ။
ပွီးခဲ့တဲ့လီဗာပူးနဲ့ပှဲတုနျးက ခွမြေိုးသာ ပွနျတှရေ့ငျ ဆောကျသမျတနျ ဝကျဈဟမျးအိမျကှငျးမှာ အနိုငျ ၃ မှတျရှာလို့ရမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဝကျဈဟမျးက တနျးဆငျးဇုံကနေ ရုနျးနပေါပွီ။ တိုကျစဈတှဲလုံးတှကေို အိမျကှငျးမှာ ဧညျ့ခံ တော့မှာပါ။ ဆောကျသမျးတနျက ဗီလာကို ၂-၀ နဲ့ နိုငျခဲ့တာက သိပျကောငျးခဲ့လိုပမဟုတျတျပါဘူး။ အိမျရှငျကိုပဲ အားပေး လိုကျကွရ အောငျ။
ဝကျဖို့ဒျ နဲ့ လီဗာပူး (ဝ-၂)
တနင်ျဂနှနေမှေ့ာ ကစားမယျ့ပှဲပါ။ တနျးဆငျးဇုံကနေ ရုနျးကနျဖို့အားထညျ့ ကစားမယျ့ ဝကျဖို့ဒျနဲ့ ရှုံးပှဲမရှိစံခြိနျတငျမယျ့ လီဗာပူးတို့ တှဆေုံ့တဲ့အခါ အိမျရှငျအသငျး အနနေဲ့ ကံကောငျးနိုငျစရာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ လီဗာပူးက အနိုငျကစားပွီး သူ့နရောကို သူထိနျးထားမှာပါ။ ဂိုးမမြားလောကျပါဘူး။
အဲဗာတနျ နဲ့မနျယူ (၂-၂)
ဒီအပတျအတှကျ ပှဲကွီး ပှဲကောငျးလို့ ပွောရမယျ့အတှဲပါ။ အာကွီးအိမျကှငျးမှာ ပွီးခဲ့တဲ့အပတျက ၃-၂ နဲ့ ရှုံးခဲ့တဲ့ အဲဗာတနျက ခွစှေမျး မညံ့ပါဘူး။ သူတို့က ပုံမှနျခွစှေမျး အတိုငျး ပဲကစားနတောပါ။ မနျယူကတော့ အတကျအကြ မငွိမျပမေဲ့ ဒီနှဈထဲမှာ ပုံမှနျပွနျဖွဈလာပွီလို့ ပွောရမှာပါ။ အနိုငျပှဲတှပွေနျရှာတှေ့ လာတဲ့မနျယူနဲ့ အိမျကှငျးကစားပုံမာတဲ့ အဲဗာတနျတို့တှဆေုံ့မှုမှာ သရရေလဒျကို မှနျးရမှာပါ။ ဂိုးမြားဖို့ရာရှိပါတယျ။
မောငျယဿ REF: football predition . com
Total Hits : 1871510